ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: ပေးပို့သူနဲ့ စာရေးသူပြောချင်သော စကားအချို့ 
ကျတော် စဉ်းစားကြည်တယ် မြန်မာဖြစ်လို့ လေပေါတာလား ဒါမှမဟုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ပဲ လေပေါတာလား သေချာတာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ လေပေါ ကြတယ် အားရွှီးတယ်လို့ပဲ စာရေးသူသတ်မှတ်တယ်.. ခပ်ရိုင်းရိုင်းပဲ သုံးတော့မယ်ဗျာ. ... နုနေရင်လည်း မရဘူး စာရေးသူ ပေါက်တော့ ပေါက်လာတယ်. သူတို့ကျမ်းအတိုင်းပဲ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖော်ပြသည့် သူသည်ကလည်း အခြားသူမဟုတ် ဗုဒ္ဓ၀င်ကျမ်းများအား တကယ်ဖတ်ရူသိမြင်တဲ့သူ ဖြစ်တယ်.....
တကယ့်ကိုလေ့လာလိုက်စားပြီး ယခုဆိုရင် ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာတော် တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်.။ စာရေးသူတော့မဟုတ်ပါဘူး စာရေးသူကတော့ ကူးချတာပါ.. သူရေးထားတော့ ပျော့တယ် စာရေးသူကတော့ သိတိုင်းအတိုင်းပဲ စကားကကြမ်းတယ်.... စိတ်ရင်းက ကောင်းပါတယ် (ဟဲဟဲ စာရေးသူလည်း နေ့တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို တွေ့၇တာနဲ့ သူတို့ အကြွားသန်တဲ့ ရောဂါ ကူးစက်သွားတာနဲ့ တူပါတယ်ဗျာ)......
အောက်ကသူ့လင့်တွေ ဖြစ်တယ်.... သူနဲ့လည်း ဆွေးနွေးနိူင်တယ်.
အခုကျွန်တော်ထံသို့ ပေးပို့လားတဲ့ mail ထဲက လင့်တွေပါ... ခရစ်တော်မပြောပါနဲ့ သူ၏တပည့်တော်များလုပ်ခဲ့သလို ယခုလက်၇ှိ တကယ်ကို အစွမ်းထက်ကြတဲ့ ခရစ်ယာန်ဆရာတော်များရဲ့ အစွမ်းမျိုး ဂေါတမမှာ ၇ှိကြသလားတဲ့ ဂေါတမလုပ်နိူင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် ဂေါတမဟာ ခရစ်တော်ရဲ့ ရှေ့ပြေးတမန်တော်ပဲ ဖြစ်လ်ိမ်ပါမယ်တဲ့ သွားကြည့်ကြဗျာ ဒီလင့်တွေမှာ
"ဤသို့သော ဗီဒီယိုလင့်များမှ ရီလိပ်( Related Videos )ဗီဒီယိုများကိုလဲ ကြည့်ရူပေးပါ" တဲ့ဗျာ..တကယ့်ကို ၀မ်းသာပဲဗျာ...... အခုလို ပေးပို့သူအား အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်.....
ခင်ဗျားတို့ ဘုန်းကြီးတွေကိုတော့ စာရေးသူတကယ်လက်လန်တယ်ဗျာ.. ခင်ဗျားတို့လည်း သိနေတာပဲ ခင်ဗျားတို့ကျမ်းကို ခဏခဏပြင်နေရတယ်ဆိုတာ ဘာလို့ပြင်လဲ အကြောင်းပြတယ်..... အတိအကျမှားတယ်လို့ ထောက်ပြရင် ဒါမြတ်စွာဘုရား ဟောတာ မဟုတ်ဘူး ဒီကျမ်းကို ပြန်ပြုစုတဲ့ ဘုန်းကြီးက မှားတာ ဒီလိုမျိုးနဲ့ အကြောင်းပြတယ်.....
ဒါဆိုရင် ယနေ့ခင်ဗျားတို့ ကျင့်ဆောင်သမျှသော အကျင့်တို့သည် မြတ်စွာဘုရားဟောသည်ဟု စာရေးသူဘယ်လုိ့မှတ်ယူရမှာလဲ.... ဒါတွေကကော သူဟောသည့်ဟု ဘာနဲ့သက်သေပြမလဲ... စာရေးသူတို့ငယ်ရွယ်စဉ်က ဓမ္မရုံမှာပဲ အောာ်အော်နေတာ မြေငလျင်လှုပ်တယ် ဒါကို ဗုဒ္ဓဘာသာက ဘယ်လိုအဖြေပေးလဲဆို ကမ္ဘာကြီးကို ထမ်းထားတဲ့ ဗြိမ္မာကြီးများက ပခုံးညောင်းလို့ ပခုံးပြောင်းတယ်လို့ အဖြေပေးကြတယ်... တကယ်တမ်းတော့ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်..
နောက်ပါဠိစကားကို အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ပြီး အနောက်ပညာရှင်များကို သွားပြတယ်..... ပြတဲံ့ကျမ်းကလည်း ယနေ့ခေတ်သူတို့ထုတ်ဝေထားတဲ့ စာအုပ်များကို ကြည့်ပြီး ပြန်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်တယ်. ...ဒါတောင်မှားသေးတယ်.. ဟိုက မှတ်ချက်ပေးလိုက်တယ်. ကောင်းတယ်ပေ့ါ
အဲဒီစကားကို ပြောမဆုံးတော့ဘူး ကဲစာရေးသူမေးမယ် ရှင်းရှင်းပြောပါ သိပ္ပံပညာရှင် ဘယ်နှစ်ယောက် ဗုဒ္ဓဘာသာရှိလဲ... မှတ်ချက်ပေးတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်က ဘာလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ မကူးပြောင်းရလဲ ... ဒီလောက်မှန်နေတဲ့ကျမ်းကိုဗျာ သိပ္ပံကို လက်ခံနေတဲ့သူ ဗျာ ခင်ဗျားတို့ဘာသာကို ဘာလို့ မကူးပြောင်းလားလဲ... ခင်ဗျားတို့ထက်တက်တယ် ခင်ဗျားတို့ရွှီးမှန်းလည်း သိတယ်... ဒီလိုတော်တယ် ကျမ်း ဒီလောက်ထက်တဲ့ကျမ်းကို ဖတ်ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးတွေ ဘာတွေများ ထူးခြားလာလဲ... ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘာတခု ကမ္ဘာကို အကျိုးပြူဖူးလဲ... ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက် လျှပ်စစ်မီးကို ထုတ်ဖော်နိူင်လား မော်တော်ကားကို တီထွင်နိူင်လား လေယာဉ်ပျံကို တီတွင်နိူင်လား .. ဆိုက်ကယ်ကို ထီထွင်နိူင်လား... လကမ္ဘာပေါ်ကို စတင်အခြေချဖူးလား.. ယခုထိတောင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်တောင် ၇ှိမှာမဟုတ်သေးဘူး .. ပြောရင်အများကြီး ခင်ဗျာတို့ကို ရိုးရိုးလေးတွေပဲ မေးတာ ခင်ဗျာတို့က သူတို့ကနှုတ်က မှတ်ချက်ပေးတာကို အတည်ယူမလား သူတို့တသက်လုံး ဘာသာတရားကို ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ ဘုရားကို အတည်ယူမလား.. သိပ္ပံပညာရှင်များက တချိန်လုံး ဘုရားမရှိဘူးလို့ ထွင်ထွင်အော်နေတာမဟုတ်ဘူး.. စာရေးသူတို့လည်း ဖြစ်တယ်၊ တခါတလေ လေးငါးခြောက်လလောက် စိတ်ထဲမှာ ဘုရားကို ယုံကြည့်ကိူုးကွယ်မူမဲ့လာတတ်တယ်. ဘုရားမရှိပါဘူးကွာ ဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာ ထင်မှတ်လာသလို နှုတ်အားဖြင့်လည်း ဖွင့်ဟ ၀န်ခံလာတတ်တယ်.. ဒါပေမဲ့ အနည်းငယ်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဘယ်အရာတခုမဆို မလုပ်ဘဲနဲ့ မဖြစ်ဘူးဆိုတာကို လက်ခံလာတယ်.. ခင်ဗျားတို့လည်း ဘယ်အရာတခုကိုမှ မလုပ်ဘဲနဲ့ မဖြစ်ဘူးလို့ လက်ခံလာတဲ့နဲ့အမျှ ကမ္ဘာကြီးကို မဖန်ဆင်းဘဲ ဘယ်အရာမှ သူ့ဟာသူ ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ ခင်ဗျားတို့ လက်ခံလာရမယ်(ဒါကျွန်တော် ဖန်ဆင်းရှင်၇ှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့ ဘာသာကို လက်ခံပေးတာ).. ခင်ဗျားတို့ပဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ.. ကမ္ဘာက နေကို ပတ်တယ်. ကမ္ဘာကို လက ပတ်နေတယ်.. စနစ်တကျ မှန်မှန်ကန်ကန်သွားနေတယ်.. အတိမ်းအစောင်းများ ဖြစ်ခဲ့သော်ေ၇တွေကြီးလာမယ်... မီးတောင်တွေ ပေါက်ကွဲလာမယ်.... ရာသီဥတုတွေ ဖေါက်ပြန်လာမယ်....
ခင်ဗျားတို့ ဗိုက်ဆာလို့ သဘာဝဆိုပြီး ခင်ဗျာ့ပါးစပ်ထဲကို ထမင်းက ခင်ဗျားတို့ဝမ်းဗိုက်ထဲကို အလိုလိုေ၇ာက်လာမလား.. ထမင်းကို စားဖို့ ချက်ရမယ်... ပြီးရင် ခင်ဗျားကို သဘာဝက လာခွံကျွေးလား ကိုယ့်လက်နဲ့ ကိုယ်စားနေရတာ မဟုတ်လား.. အခု လက်၇ှိ ခေတ်ပေါ့ ပါဠိစကားကို ထွင်ထွင်ရွတ်ဆိုပြီး ပညာတတ်လို့ ပြောရမလား.. စာရေးသူရဲ့ ပို့စ် တခု ကွန့်မန်းအောက်မှာ ခရစ်ယာန်ရဟူဒီဆရာတော်များကတဲ့ သီဟိုဠ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော်များထံ (သိုင်းလာလေ့ကျင့်) တရားလာသင်တယ်တဲ့.. လာသင်လို့ အမြင့်ဆုံးရတဲ့ ဆ၇ာတော်တောင် အရှေ့အနောက် ကမ္ဘာကို (၄၀) ကိုမြင်ပြီး ဖန်ဆင်းရှင် ပျောက်သွားတယ်တဲ့ ရွှီးဗျ ရွှီး ရွှီး မြန်မာဖြစ်လို့ လေရွှီးသည်မဟုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ လေရွှီးသည်... ဟေ့ဗျာ ဒီအတွက်စာရေးသူရိုးရိုးလေးပဲ ပြန်မေးပါရစေ.... အရှေ့အနောက်ကမ္ဘာလေးဆယ် မလိုပါဘူး။ ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်နေလို့ မြန်မာပြည်ကြီး နောက်လေးငါးနှစ်ဆို မြန်မာပြည်ကြီး ဒီထက်ဆိုးလာမလာ ဒီထက်ကောင်းလားမလား??? နောက်ခင်ဗျားတို့ မြန်မာနိူင်ငံကြီး နာဂစ်ဝင်တုန်းက ဒီသီဟိုဠ်ကဆရာ တော်တွေ ဘာလုပ်နေလဲ ဒီလောက် ဗုဒ္ဓဘာသာနူ်ိင်ငံကို မုန်တိုင်းဝင်ကိုမှ မမြင်ရဘူးလား မတွေ့ရဘူးလားကွာ.. ခင်ဗျားတို့အားလုံးကို သဘောတူညီစွာ ဘာသာတခုကို ပြောင်းလိုက်ဗျာ လေးနှစ်အတွင်း မုချခင်ဗျာတို့ မြန်မာနိူင်ငံကြီး ဒီထက်သာရမယ်.. ဘယ်လိုလဲ..ဆွတ်ဇလန်နိူင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဆုကို ပေးလိုက်တယ်. အေးပေးတဲ့ နိူင်ငံက လုံးဝ ခရစ်ယာန်နိူင်ငံကြီး သူတို့တွေ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဘာလို့ မကူးပြောင်းကြလဲ???? ခင်ဗျားတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆို ဘယ့်သူကိုပေးမလဲ ခင်ဗျားတို့ကိုယ် ခင်ဗျားတို့ ပေးမှာပေါ့.. ခင်ဗျားတို့နဲ့ ကျတော်တို့နဲ့ တိုက်ခိုက်မူထက် မွတ်စလင်မ်နဲ့ ခရစ်ယာန်နဲ့ online တိုက်ပွဲက ပို ပြင်းထန်တယ်... Hacker အချင်းချင်းတောင် မွတ်စလင်မ်နဲ့ ခရစ်ယာန်နဲ့ ဒီဘာသာရေး Online စစ်ကို တိုက်နေကြတာ online ပေါ်မှာ အမြဲထိုင်နေတဲ့ သူတွေ သိမှာပါ.. ဒါကို ရှောင်လွဲ၍ ခင်ဗျားတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကို ပေးတာ free မဖြစ်ကြပါနဲ့... အနောက်နိူင်ငံသားများက ဘာသာယုံကြည်မူ လူမူပေါင်းသင်းဆက်ဆံမူ အကုန်လွတ်လပ်တယ်နော်... ခင်ဗျားတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာလွတ်လပ်တယ်ဆိုတာ အလည်းကားပါဗျာ.. ဘုန်းကြီးရဲ့ သြ၀ါဒကို ခံယူရတယ်၊ ဘုန်းကြီးက ကလေးကို တွေ့တာနဲ့ အတင်းရှိခိုးခိုင်းတာ.. ဒီလိုမျိုး ဘာလို့ လုပ်ခိုင်းတာလဲ.. ဂေါတာမကိုယ်တိုင်လဲ အိန္ဒိယနိူင်ငံမှာ သူရဲ့တရားကို လူတိုင်းလိုက်ဟောခဲ့တာပဲ.. သူထိုင်နေရင်: သူ့ရှေ့ဘယ်သူမှ ရောက်လာတာမှ မဟုတ်တာ... မသိရင်ဘဲ ခင်ဗျားတို့ဘာသာကို ထိုင်နေရင်း ရောက်လာသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့... ဘယ်သူကိုမှ မဆွယ်ဘူးတဲ့ ဟုတ်ပါတယ်.. ဘာတို့နဲ့
ခင်ဗျားတို့က မဆွယ်ပါဘူး သူများဘာသာဝင်များရဲ့ ကိုးကွယ်မူကို အထင်သေး အမြင်းစောင်း ယုံကြည့်မူများလွှဲမှားသွားအောင် တိုက်ခိုက်ကြတယ်.. မွတ်စလင်မ်ဘာသာဝင်များ ကိုးကွယ်တာ ၀က်ဘု၇ား ခွေးသား ၀က်မြေး ကြက်ယောက်ဖ ဆိုပြီး စွပ်စွဲကြတယ်..... ဒါတွေ ခင်ဗျားတို့ပြောတာ တခုမှလည်း မဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့် မွတ်စလင်မ်ကျမ်းများကိုလည်း ဆက်လက်လေ့လာကြပါအုံး... နောက်ခရစ်ယာန်က ရိုမန်ကတ်သလစ်ဘုန်းကြီးများ ခင်ဗျားတို့ဆီမှာ လာလေ့လာတယ်... ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များက ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များကို ခရစ်ယာန်ဘာသာလို့ သတ်မှတ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူ.. ဘာလို့လဲဆို ရုပ်တုဆင်းတုပြုလုပ်ကိုးကွယ်ကြလို့လေ.. ခရစ်ယာန်ကျမ်းစာများကလည်း ခရစ်တော်ကလည်း ရုပ်တုဆင်းတု ကိုးကွယ်မူ အရွံရှားဆုံးပဲတဲ့ လူလူချင်းကိုးကွယ်ဦးချဝတ်ပြုမူကိုလည်း အရွံရှားဆုံးပဲတဲ့ဗျာ... ဒါကြောင့် ခရစ်ယာန်ကျမ်းကိုလည်း လေ့လာကြည့်ပါအုံး.. christian wiki ထဲမှာလည်း ရိုမန်ကတ်သလစ်ကို တသီးတခြား ခရစ်ယာန်အနေနဲ့ ထားရှိထားကြပါတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ်မယ်.. နောက်ခင်ဗျားတို့အဆိုးဆုံးက ခရစ်တော်ကို ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဘုန်းကြီးများထံမှာ တရားသွားသင့်တယ်တဲ့.. ခရစ်ယာန်တွေပေါက်တာပေါ့.. ဒါနဲ့ ခရစ်ယာန်များက ပြန်လည်ဖြေရှင်းကြတယ်.. ဒါဖြစ်သင့်သလား ... ဒီလိုလုပ်လို့လဲ ခရစ်ယာန်ဘာသာသာသနာ မွတ်စလင်မ်ဘာသာသနာ့ ဟာ မညှိးနွမ်းပါဘူးလို့ ပီတာကျော်စကားလေးပဲ ....ယူသုံးပါရစေဗျာ... ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ တနေ့တနေ့ထက် လျော့နည်းသွားတာတော့ တကယ်ကို ၀မ်းနည်းစရာပါပဲဗျာ.. ရော့ ခင်ဗျားတို့ စကားနဲ့ပဲ ခင်ဗျားတို့ကို ပြန်ပြပါရစေ.
Posted by messenger at 8:50 PM
Labels: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, ပေးပို့သူနဲ့ စာရေးသူပြောချင်သော စကားအချို့ 